Zvese zvaunoda kuti uzive nezve GOES yemamiriro ekunze satellite | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | | Kufungidzira
Iwe pamwe wakambonzwa nezve nzvimbo yekuongorora satellites paterevhizheni. Iwo michina ine yakakwirira kwazvo tekinoroji kusimudzira uye iyo inokwanisa kutipa ruzivo rwakakura nezve izvo zviri muchadenga uye zviri kuitika pasi redu. Mune ino kesi, isu tiri kutaura nezve setiraiti Goes. Iyi satellite inotibatsira mukufungidzira mamiriro ekunze zvakanyanya. Uye ndeye kuti kufanotaura mamiriro ekunze chinhu chakaoma kunzwisisa. Haisi kana chimwe chinhu chingagadziriswe kana kuti nemamwe maalgorithms anoshanda. Neichi chikonzero, zvinozivikanwa kuti kazhinji "murume wemamiriro ekunze anotadza."
Muchikamu chino, tiri kuzokuratidza kuti nei GOES iri yakanakisa meteorological satellite iyo yakaiswa munzira yekutenderera nguva dzese.
1 Inoda kufanotaura mamiriro ekunze
2 Chii chinonzi GOES?
3 Hwemhando mhando uye mashoma ekufanotaura zvikanganiso
4 Spatial kutarisa
Inoda kufanotaura mamiriro ekunze
Kufanotaura mamiriro ekunze chinhu chatinoda kuti tiite zviitiko zvedu kana kuronga zvimwe zviitiko. Zvichienderana nemamiriro ekunze, zvimwe zviitiko zvinoitwa kana kwete. Naizvozvo, kuziva mamiriro ekunze kwakakosha. Zvisinei, Haisi basa rakareruka. Iyo yakaoma kwazvo sezvo misiyano yemuchadenga inogona kuramba ichichinja mune imwe nyaya yemaawa. Kunyangwe nhasi kune akawanda mvura inonaya uye tinogona kuziva kana mangwana kuchanaya munzvimbo medu, idzi data dzinogona kazhinji kukundikana.
Uye ndezvekuti kunyangwe mamiriro ekunze akambotadza, zvinowanzoitika. Nguva inozivikanwa kuti inokanganiswa nemisiyano yakawanda uye mamiriro ekunze. Kuti titarise zviri kuitika mudenga medu, isu tine imwe maruva emamiriro ekunze ekuona satellites. Aya ma satellite anotarisira simba ziva mamiriro emuchadenga aripo nguva dzese uye anokwanisa kufanotaura shanduko yavo.
Satellite yeGoES yakatangwa kuti ikwanise kufanotaura mamiriro ekunze zvakanyatsonaka uye nenzira kwayo. Kwete chete iyo inopa izvo, iyo inopa zvakanyanya zvimwe.
Chii chinonzi GOES?
GOES ndiwo chirevo che Geostationary Kushanda Kwemhepo Satellite. Iyi satellite inofungidzira shanduko pakati pema satellite ese erudzi urwu. Iko kune polar orbit satellites uye mamwe mageostationary orbit satellites. Iwo ekupedzisira ndeaya ane orbit inoenderana pamwe nekumhanya kwatave nako kutenderera kwePasi. Izvi zvinoreva kuti inogara ichitipa iwo iwo iwo mufananidzo wepasi. Iyo inokwanisa kuramba ichibhururuka pamusoro pehumwe chaiwo mapoinzi papasi redu. Izvi zvinoitwa nekuti chinangwa chayo chikuru ndechekupa shanduko yemamiriro ekunze kuti igone kufanotaura shanduko dzichaitwa.
Iyo GOES-R modhi iri mubvunzo ndiyo inochinja zvakanyanya sezvazviri inogadziridza zviridzwa uye data kugadzirisa kugona. Iyo inokwanisa kugadzirisa ruzivo muhukuru hwakawanda uye nekumhanyisa, saka inotipa sevhisi nehumwe mhando uye nemazvo. Izvi zvinonyanya kudikanwa kana isu tichida kuwana chaiyo pakugadzirira mishumo yekufungidzira kwemamiriro ekunze tisina kana nekadiki kekukanganisa.
Uyewo, ine resolution yenzvimbo yakapetwa kanokwana kupfuura zvakajairwa uye inovhara zvakapetwa kashanu nekukurumidza. Iyo chaiyo-nguva mepu yemheni mheni inonakidza. Izvi zvinobatsira kuve nekuwedzera kwekufungidzirwa kwedutu uye kunatsiridza nguva dzaunogona kunyevera nezvekuumbwa kwedutu. Izvi zvakakwana kune avo vanodzidza chamupupuri kana avo vari "kuvhima chamupupuri." Kune rimwe divi, iyo inobatsirawo mukuvandudza kufungidzira kwedutu uye kugona kwayo kunogona, kudzora kuri nani kweX-ray flux kubva kuzuva, nezvimwe.
Hwemhando mhando uye mashoma ekufanotaura zvikanganiso
Izvo zvinoitwa neGoES satellite ndeyekuti uve nehunhu hwakanaka kana uchinge wawana meteorological dhata uye nechepazasi pekukanganisa. Mubvunzo wakabvunzwa nevanhu vazhinji pavaiisa mumugwagwa ndewe dai taive nezvakafanotaurwa zvinokundikana zvishoma pane zvakapfuura izvi. Zvinonyanya kunetsa kuziva kuti kuchanaya pazuva rakadai, kukanzura zvirongwa nekuda kwayo uye pakupedzisira kuti izuva rine zuva zviri nani kupfuura nakare kose. Kana zvakapesana, kuti tinoenda kunonwa uye tobva tadonha kugeza zvine simba.
Kufanirwa kwemamiriro ekunze kunowanikwa kubva kumamodeli ayo anoita simulation yezvichaitika. Kuti uite izvi zvekufananidzira, zvinodikanwa kuti uzive kukosha kwemamiriro ekunze emamiriro ekunze panguva iyoyo uye maitiro avanofanira kugadzirisa aya maitiro. Ndokunge, kana tembiricha, kumanikidza kwemhepo uye kukosha kwemhepo kuchiramba kuchinja sezvavari kuita izvozvi, tinogona kufanotaura kuumbwa kwemvura. Zvisinei, zvinokwanisika kuti aya maitiro anoshandura maitiro avo kune imwe misiyano. Izvi ndizvo zvinoita kuti iko kukanganisa kugare kuripo.
Kune aya mamodheru kuyerera zvirinani uye nekupa yakaringana dhata, isu tinotoda yakawanda dhata yekuisa mune akasiyana. Izvo zvakanyatsojeka izvi data, zvirinani kufungidzira iyo GOES satellite inogona kuita. Nezviridzwa zvainazvo, iyo satellite inogona kuona munguva chaiyo, pasina kukundikana uye nekuenderera, pasi penyika mumatanho gumi nematanhatu. Uyezve, Inosanganisira migero inooneka, 4 padyo nemachira e infrared uye imwe nzira gumi dzemwenje. Zvese izvi kugona zvinokupa shoma nzvimbo yekukanganisa.
Kubatsira kweiyi shanduko setiraiti ndeyekuti haisi chete yekutarisisa pasi uye nekuona kwemamiriro ekunze. Iyo zvakare ine yekudyidzana mamishini nevekunze kutaurirana Iri basa, semuenzaniso, yekuziva nzvimbo dzenzvimbo dzakadai seiyo mhepo yezuva. Inoongororawo kumwe kuwanda kwemwaranzi inogona kukuvadza vanoongorora muchadenga kuti isu tabva pasi.
Pamusoro pekuongorora njodzi dzinogona kuitika kune vanoongorora muchadenga, ruzivo urwu runogona kushandiswa kunyevera nezve zviitiko zvine njodzi zvinogona kuitika. Nekudaro, kumwe kukuvara kweterevhizheni kunogona kudzivirirwa. Iyo ine magnetometer ine basa rekuyera iro remagineti uye simba rakatakurwa nezvimedu zvinobhadhariswa kunze.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve GOES satellite, yakanakisa iripo ndeyekufambidzana
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Network Meteorology » Kufungidzira » ANOENDA satellite
Kuparadzana uye kusangana